Madaxweynaha Puntland oo furay Imtixaanka Dugsiga Sare iyo Fasalka 8aad - Jowhar Somali Leader
Home News Madaxweynaha Puntland oo furay Imtixaanka Dugsiga Sare iyo Fasalka 8aad
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa maanta daah furay Imtixaanaadka Dugsiga Sare iyo Fasalka 8-aad ee Puntland, kaasoo sanadkan ay u fariisanayaan illaa 16,500 oo Arday.
Imtixaanaadkan ayaa la qaadayaa, iyadoo feejignaan dheeraad ah oo dhanka caafimaadka laga galay cudurka Coronavirus, iyadoo Iskuulada la geeyay qalabka loogu tala galay in lagula socdo heer-kulka qandhada, waxaana ardayda iyo macalimiinta lagu sameynayay baaritaan.
Ardayda imtixaanka u fariisatay ayaa sidoo kale lakala fogeeyay, waxaana Wasaaradaha Caafimaadka iyo waxbarashada ayaa iska kaashaday sidii loo raaci lahaa tilmaamaha caafimaadka iyo baqadbka ardayda u fariisatay imtixaanka.
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni ayaa Imtixaanka ku daha-furay Iskuulka Cumar Samat ee magaalada Gaalkacyo, oo ay saaka Imtixaanka u fariisteen 592 Arday oo qeyb ka ah 4,138 oo Imtixaanka ku galaya guud ahaan Gobolka Mudug.
Saciid Deni ayaa hambalyo u diray ardayda u fariisatay imtixaanka, waxaana uu kula dardaarmay ardayda inay ku dadaalaan sidii ay uga mira dhalin lahaayeen hadafkeeda, isagoo u rajeeyay guul iyo in alle u fududeeyo Imtixaanka.
Ardayda Imtixaanka loo daah-furay guud ahaan Puntland waa 16,500 oo ardey, 5,447 Ardey oo ka mid ah waa Dugsiga Sare halka 11,053 Ardey ay u fariisanayaan Imtixaanka Fasalka 8-aad.
Imtixaanka Ardayda Puntland